TCM ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး - Shijiazhuang Yiling ဆေးရုံ
အဆိုပါဒီဂရီမျဉ်းလမ်းညွှန်အဆငျ့ကုထုံးယန္တရားဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုကုထုံးယန္တရားအတွက်သဘောပေါက်ခံရဖို့တရုတ်ဆေးပညာ၏အပ်စိုက်ကုထုံး, အနှိပ်ခံခြင်းနှင့်အနှိပ်ကုသမှု enable လုပ်ဖို့မိ၏ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာသီအိုရီနှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာနှင့် microcomputer နည်းပညာပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ထင်ရှားတဲ့အင်္ဂါရပ် microcomputer ထိန်းချုပ်မှု parameters တွေကိုအားဖြင့်တည် ထား. , ကုသမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပစ်မှတ်ထားခံရဖို့သကဲ့သို့, ကုသမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့ Modes သာရှေးခယျြ, အဆင်ပြေပြေနဲ့ထိရောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးနှင့်ပူးတွဲဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါ, ဦးနှောက် infarction, hemiplegia ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပြီးနောက်နှောက်သွေးသွန်။
ထို့အပြင် "အကောငျးဆုံးအခြိနျအပ်စိုက်ကုထုံးနည်းလမ်း" အဖြစ်လူသိများဒီဂရီမျဉ်း Stream မှတ်ချက်, ထူးခြားတဲ့ curative အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အံ့မခန်းအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်အတူရှေးဟောင်းတရုတ်အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်မှော်တရုတ်ဆေးပညာဖြစ်ပါသည်။ microcomputer SCM နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဒီဂရီမျဉ်း Stream နှင့်တိကျမှန်ကန်အချိန်တွက်ချက်မှုများလိပ်ရှစ်နည်းလမ်းများအစားဆေးထိုးအပ်၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၏အသုံးပြုမှုများ၏သဘောပေါက်, အပ်စိုက်ကုထုံးနည်းစနစ်၏အစစ်အမှန်ခြင်း simulation, အေးစက်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်, ချိန်ခွင်လျှာ yin နှင့် Yang ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါဒီဂရီမျဉ်းရောဂါပျောက်ကင်းမှတဆင့်ရ။
ဒူး osteoarthritis, သွေးတိုးရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်း, အိပ်မပျော်, နောက်ကျောနာကျင်မှု, sciatica ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, dysmenorrhea, ခိုင်မာသောလည်ပင်း, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ spondylosis, အေးစက်နေတဲ့ပခုံး, ဖနောင့်နာကျင်မှုနှင့်တူသော။
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ hyperthermia များတွင်အသုံးပြုခရိုဝေ့ဖ်ကုထုံးယန္တရား non-အဆက်အသွယ်အပူနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, အပူလောင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှပ်စစ်အပူလောင်၏အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာများကို၏တိုးတက်မှု, မေ့ဆေးမပါဘဲခရိုဝေ့ဖ်ကုသမှု, ရိုးရှင်းသော, လုံခြုံ features တွေနှင့်တကွ, ဆေးခန်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
1) Urology: ဆီးအိမ်ကင်ဆာ, ဆီးကျိတ် hypertrophy, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ
2) လိုင်ဌာန: cheilitis, glossitis, polyps, periodontal ရောဂါ, အနာ, periapical periodontitis, ကင်ဆာ။
3) Gastroenterology: အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသွေးထွက်, ကိုမီးရှို့ polyps, အစာအိမ်နာ solidification, ကျဉ်းမြောင်း esophageal dilatation ။
4) ပြန်လည်ထူထောင်ရေး physiotherapy: lumbar ကြွက်သားမျိုး, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ spondylosis, ကြွက်သားညောင်း, အေးစက်နေတဲ့ပခုံး, အဆစ်, ဒဏ်ရာအနာရောဂါငြိမ်းစရာအရှိန်အဟုန်မြှင်။
5) မီးယပ်: သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု, polyps, သားအိမ် fibroids, mastitis, အင်္ဂါဇာတ်, တင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ရမ်းရောဂါ, Pasteur cyst, လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့။
6) အရေပြားရောဂါဗေဒ: လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့, underarm အနံ့, hemangiomas, အခါရေယုံ, နှင်းခူ။
7) Anorectal: ပြည်တွင်းရေးလိပ်ခေါင်း, ပြင်ပလိပ်ခေါင်း, ရောထွေးလိပ်ခေါင်း, rectal polyps, စအိုနှင်းခူ။
8) ENT: epistaxis, နာတာရှည် rhinitis, ယုတ်ညံ့တာဘိုင် hypertrophy, နှာခေါင်း polyps, pharyngeal lymphoid follicles, nasopharyngitis, ဂလင်းတမျိုး။
4.M ulti-function ကို moxibustion device ကို
ဘက်စုံသုံး moxibustion device ကိုခေတ်မီအီလက်ထရောနစ်ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်သံလိုက်ကုထုံးကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်နွေးထွေးသော moxibustion, နွေးအပ်စိုက်ကုထုံး, moxibustion, ရေမြှုပ် moxibustion ခေတ်သစ် moxibustion ယန္တရား၏ moxibustion moxibustion စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရိုးရာ moxibustion ၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။
1) တုပ်ကွေး, ပန်းနာရင်ကြပ်နဲ့ဒါပေါ်
2) အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဒါမှအပေါ်အဆစ်အဆစ်, မသင်မနေရ spondylitis, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ spondylosis, အေးစက်နေတဲ့ပခုံးနှင့်။
အနီရောင်အလင်းကုထုံးစက်ကိုအချို့သောကြီးမားသောဧရိယာရောဂါများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုပေးဆေးရုံများနှင့်မိသားစုများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အလင်းကုထုံးကိရိယာ၏အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Light က output ကိုကွဲပြားခြားနားသောကောင်လူနာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခိုင်မာတဲ့နှင့်အားနည်းဖိုင်တွေသို့ခွဲခြားထားတယ်။ မြေတပြင်လုံးစက်အဆိုပါရွှေ့ပြောင်းကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်း, အနီရောင်အလင်းခေါင်းကိုလည်းလျှပ်စစ်တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ဖို့ powered နိုင်ပါတယ်ချမှတ်သောအလွန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများကလွယ်ကူချောမွေ့သောစျေးကွက်အပေါ်ကို manual အနီရောင်အလင်းနှင့်အလိုအလျောက်အနီရောင်အလင်းဖြစ်၏။
1) မီးယပ်: သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, အင်္ဂါဇာတ်, တင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ရမ်းရောဂါ, နောက်ဆက်တွဲရောင်ရမ်းခြင်း, leukoplakia, လိင်အင်္ဂါယားယံခြင်း, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာ။
2) လူတို့: ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, အနာရောဂါငြိမ်းစရာနှင့်ပွနျလညျကုသမှုအနာ။
3) အရေပြား: ဒီတော့အပေါ်အခါရေယုံ, အနာ, အရေပြားရောင်ရမ်း, အဖု, bedsores နှင့်။
4) ENT: စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် rhinitis, pharyngitis ဒါပေါ်မှာ။
5) ခွဲစိတ်ကုသ: အပူလောင်, စိတ်ဒဏ်ရာ, ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ခွဲစိတ်သည်အနာပျောက်စေသော။
6. သွေးခုန်နှုန်းကုထုံးစက်ကို IF
Analgesic, သွေးလှည့်ပတ်မြှင့်တင်ရန်, အမာရွတ်ပျော့ပြောင်း, အရိုးကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း။
physiotherapy တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်, IF electrotherapy 100 ကျော်အနှစ်တစ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ electrotherapy ကုသမှု, ကာကွယ်တားဆီးရေး, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့်ပြည့်စုံသောကုသမှုတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည် IF ။
1) ဆော့ဖတစ်ရှူး, osteoarthrosis, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ spondylosis, အေးစက်နေတဲ့ပခုံး, အဆစ်အဆစ်, ဒါပေါ်မှာပျော့တစ်ရှူး contusion, myositis, tenosynovitis, disuse ကျုံ့နှင့်။
2) ဒါပေါ်တွင်အခြားခွဲစိတ်ရောဂါများ, အမာရွတ်, ကော်, Post-ဆေးထိုးနဗ်ကြော, postoperative အူလမ်းကြောင်းသွက်ချာပါဒနဲ့။
3) ဒါကြောင့်အပေါ်အာရုံကြောစနစ်ရောဂါများရံ neuropathy, မျက်နှာ neuritis, sciatica နှင့်။
4) ဒါကြောင့်အပေါ် Digestive ရောဂါများ, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းတင်းမာမှု, နှေးကွေးနေချုပ်နှင့်။
5) အခြားဆီးကျေးရွာအုပ်စုကျောက်, urinary retention ကို, နာတာရှည်တင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ရမ်းရောဂါ။